leben RBSiC - Shiinaha ZhongPeng dhoobada Gaarka ah
Reaction addoonsi Silicon Carbide for Xiro Qaybo joogta ahayn iyo ku baabbe'een, saa'idka Reaction The addoonsi Silicon Carbide u dul qaadasho tiro balaadhan oo ah acids iyo alkalis. Iyo waxqabadka fiican ee xoogga sare, qalbi engegnaantooda aawadeed sare, iska caabin ah ay xirtaan sare, iska caabin heerkulka sare, iska caabin ah daxalka. Noocyada kala duwan ee muuqaalo qaybo gaar ah oo ku haboon yihiin macdanta, kiimikada, wax soo saarka qodniinka-, aerospace iyo warshadaha nukliyeerka, sida deegaan gaar ah. Waxaan ka dhigi kartaa size kasta oo ...
Reaction addoonsi Silicon Carbide for Irregular Wear Parts and Thrust Bearings
Reaction The addoonsi Silicon Carbide u dul qaadasho tiro balaadhan oo ah acids iyo alkalis. Iyo waxqabadka fiican ee xoogga sare, qalbi engegnaantooda aawadeed sare, iska caabin ah ay xirtaan sare, iska caabin heerkulka sare, iska caabin ah daxalka. Noocyada kala duwan ee muuqaalo qaybo gaar ah oo ku haboon yihiin macdanta, kiimikada, wax soo saarka qodniinka-, aerospace iyo warshadaha nukliyeerka, sida deegaan gaar ah. Waxaan ka dhigi kara wax kasta oo tirada bixiyo sida codsiga macaamiisha.
Gasho iska caabin ah, xoog heerkulka sare iyo iska-caabbinta daxalka Reaction addoonsi SIC wax an fiican ee qaybaha ay xirtaan, sida boolal, taarikada iyo impellers dhigi. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in saa'idka riixdaan ay qaban karaan xamuulka aad u sarayso in cabitaanno ah loola wasakhaysan.
Silicon Carbide SIC (SiSiC / RBSiC) Maqaallo:
Abrasion / caabin daxalka
sifooyinka lama filaan ah kaamerada u fiican
caabin qayilo u fiican
gacanta ku cabbir Good of muuqaalo adag
conductivity kaamerada Sare
waxqabadka soo hagaagaya
nolosha dambe u dhexeeya / bedelka dhisayso
Resistance si daxalka
Resistance Sare inuu xirto
Xoog heerkulka sare ilaa 1380 ° C
Previous: RBSiC (SiSiC) darafta toobinta
Next: Reaction Silicon addoonsi SEPARATOR filter carbide
iyo jiidh RBSiC rakiban Oo Dhuumaha
RBSiC (SiSiC) xeryahooda
Rbsic (Sisic) toobinta darafta
RBSiC (SiSiC) Inner dahaarka Board
Rbsic (Sisic) Saddex is dhaafsi
Rbsic Duufaan tubada
SIC dhululubada ah
Silicon tageerayaasha Sisic
Sisic alwaaxdii saqafka haysay
SiSiC saqafka u dubo
Sisic Gaarka ah (Rbsic) Qaybo ka
Xiro Protection RBSiC Products
Xiro caabida RBSiC safay (SiSiC)
Xiro Plate RBSiC caabida
qayb RBSiC Xiro-caabida in Makiinado
4.5 inch fuuli jiray nozzles muquuninta
DN100 hal Uubo jihada taxane SPR biiyaha
Flange biiyaha Desulfurization Connection